China Door handle FOR Mercedes Truck Ex waje Exor Door Aka ekpe / Aka nri 9017600359 9017600459 0007601359 factory na suppliers | ZODI Nchekwa onwe Parts
Mmanụ Mgbawa Mmiri Efere 20771578
Ọnụ ụzọ na-arụ ọrụ maka ụgbọala Mercedes n'èzí, ọnụ ụzọ mpụga aka ekpe / aka nri 9017600359 9017600459 0007601359
:Dị: Ọnụ ụzọ
Car Mee: Maka MERCEDES-BENZ
Car Ọnụ ụzọ ejiri High Quality Sprinter 901 902 903 Door Mkpọchi emechi 0007601359
Aha Car Ọnụ ụzọ ejiri High Quality Sprinter 901 902 903 Door Mkpọchi emechi 0007601359
Akwụkwọ ikike Ọnwa iri na abụọ
Akara Super Akụkụ
Oge ịkwụ ụgwọ L / C, T / T, Western Union, Moneygram, Paypal
Ngwugwu Nnọpụiche Nnọpụ
Oge Mbuga ozi N'ime ụbọchị iri na ise ka akwadochara ịkwụ ụgwọ
Isi ahịa Mba Europe, East south Asia, Middle-East, Africa na ụfọdụ na America
Ntinye n'ụgbọala: N'azụ ma ọ bụ na-agbagharị n'aka ekpe na aka nri
Maka VW LT 1996-2006
Anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa nke na akpaaka akụkụ, inclouding Volkswagen Transporter, Fiat Ducato, Ford n'ụzọ, Renault Master, Benz Sprinter, Iveco Daily wdgE wezụga na anyị nwere ike inye ndị na-esonụ kasị ezi obi price na elu àgwà ngwaahịa gị.
1. Ọnụ ụzọ
2. Ọnụ ụzọ
3. Mkpọchi sịlịnda
4. Mgbanye mgbanye
5. Ọnụ ụzọ ala
6. Ndị ọzọ (Kpọtụrụ anyị)
1, Logo ihe agbakwunyere dị ka ndị ahịa onwe imewe.
2, Nkọwa zuru ezu nke nkọwa
3, Jighi njiri mara mma
4, Durable in ojiji na ịdabere na arụmọrụ
5, Ọkachamara Nka na ụzụ;
6. Na-echebara Ndị Ọrụ Ike;
7.Excellent Producers Systerm na Cooperations;
8, Nchịkwa Iwu Nhazi siri ike;
9, Ezigbo Safelọ Nchekwa Nchekwa.
10.Packeging omume ọma na neatly, dị ka customers'requirment
11.Provde ọkachamara ndụmọdụ ahịa dị iche iche ahịa
Usoro Nkebi Nchekwa onwe Part Aha Ogo Ogo
Ngalaba Injin Spark nkwụnye, cylinder kit, isi cylinder, sịlịnda, carburetor, pistin set, pistin mgbanaka set, mmanụ mgbapụta, push mkpanaka, valvụ set, rocker ogwe aka, cam na-eso ụzọ, cam eso ụzọ na aro, center ipigide, mpụga ipigide, cam aro, gia speedo, wdg. OEM, A
Nzipu Parts Ọgba igba Starter, crank aro, ụlọ ịnyịnya ibu, ejikọta mkpanaka kit, sprocket set, ipigide Assy, ipigide diski, ipigide nsogbu efere, yinye wdg OEM, A
Akụkụ ụkwụ N'azụ ehi, okpu n'azụ bub, okpu n'ihu ehiwe, n'ihu ehiwe, sprocket, n'ihu breeki disk, breeki na mpe mpe akwa, breeki akpụkpọ ụkwụ, rim, roba n'azụ ehiwe, olu akwa kwushin, ọduọ n'iru, kwuru, kpọchie sprocket azụ, axle, haịdrọlik breeki nna ukwu cylinder. wdg. OEM, A
Akụkụ USB Throttle USB, ipigide cable, n'ihu breeki, mita cable, n'ihu mgba ọkụ USB, ọsọ mgba ọkụ, akara nke batrị, waya njikota, ịgbanwee azụ breeki, ọsọ cable wdg OEM, A
Akụkụ ahụ N'azụ ujo absorber, n'iru azuokokoosisi isi, gia mgbanwe pedal, n'iru azuokokoosisi ịnyịnya ibu, breeki mkpara, breeki pedal, iyuzucha muffler, ụkwụ izu ike roba, ụgbọelu, n'akụkụ guzoro, n'ihu ujo, center guzoro, oche, mmanụ ụgbọala tank, njikwa mmanya, n'ihu apịtị-nche, n'ihu pedal mkpanaka, igba Starter, azụ ndụdụ ndụdụ, mgbodo isi ọkụ, menjuobi set, mgbanye eriri igwe wdg OEM, A
Akụkụ eletrik Ipigide / breeki mgba ọkụ set, batrị, ofufe-wheel ịnyịnya ibu, ipigide / breeki menjuobi & mgba ọkụ ịnyịnya ibu, Starter ọsọ agba anọ, mpi, flasher, stator onwe assy, ​​aka mkpọchi, mmanụ mkpọchi, stator assy, ​​Starter eriri igwe / ìhè eriri igwe, C, D, I , mmezi, mgbanye ọkụ, okpu mmanụ ụgbọ ala wdg. OEM, A
Plastic Akụkụ Bulb njide, mita assy, ​​mirror, ikpe nke isi ìhè, ekpuchi mmanụ ụgbọala tank, menjuobi n'echebe set, ụlọ isi ìhè, n'ihu fenda, oghere ọdụ ìhè, n'azụ fenda, yinye cover, isi ìhè, ọdụ ìhè, winker ìhè, n'akụkụ cover wdg . OEM, A
Usoro gasket Ihe mkpuchi mmanụ, gasịlị gasket, ikpochapu gasket, ngwa gasket zuru ezu, ịdebe roba set, nkwonkwo carburetor wdg. OEM, A
Ngwa Igbe ọdụ, okpu agha, akara mmado, okpu, uwe, uwe aka, nna ukwu agba, usoro mkpu-mp3, usoro mkpu mp3-2, usoro mkpu, ụgbụ tank mmanụ, ụkwụ azụ ụkwụ nwere agba, ụkwụ azụ ụkwụ na onye na-agba agba agba, njigide ihe na agba, taya akara, adịgide roba na agba wdg
Ogo & Ọrụ Na ZODI, ihe kachasị mkpa anyị 1 na-enye ndị ahịa anyị nnukwu ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa dị elu.
Oge Ndenye Oge Anyị raara onwe anyị nye inye oge ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ siri ike iji hụ na emezuru oge gị niile.
Unbeatable Prices anyị nọgidere na-agbalịsi ike ịchọta ụzọ nke mbenata anyị mmepụta-akwụ ụgwọ, na-enyefe ego karịrị gị!
Mmata Ihe mgbaru ọsọ nke ika ọ bụla siri ike bụ imata ọkwa nke na-eme ka echiche nke ịdị mma na nke bara uru n'ime ndị ahịa gị niile.
Onyinye puru iche inye onyinye - Anyị nwere ike ịmepụta katalọgụ dabere na arịrịọ ndị ahịa iji nyere gị aka ịzụlite ahịa ọhụrụ;
Ozi General Order
Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ọrụ anyị na ngwaahịa dị iche iche anyị na-enye. Anyị nwere ahụmịhe n'ịrụ ọrụ na Middle East, Africa, ahịa US, ahịa Europe na ahịa Africa, ahịa ndịda America.
Biko mara na oge ndu anyị na-adabere na ihe ụfọdụ na ihe dị iche iche. Ihe ịga nke ọma anyị dabere na nghọta anyị banyere ọchịchọ na ọdịdị nke oge nkwado na azụmaahịa.
Ọ bụ ya mere anyị ji ekwenye mgbe niile na enyere iwu ọ bụla n'oge.
Lelee n'okpuru maka ozi ndị ọzọ gbasara ịtụkwasị iwu
1. Ajụjụ-Ọkachamara kwuru.
2. Kwenye ọnụahịa, oge ndu, ihe achọrọ, usoro ịkwụ ụgwọ wdg.
3. Ahịa ZODI zigara Akwụkwọ ọnụahịa Proforma na akara ZODI.
4. Ahịa na-akwụ ụgwọ maka nkwụnye ego ma zigara anyị akwụkwọ azụmahịa.
5. Ga-agwa onye ahịa na anyị akwụla ụgwọ, dozie mmeputa ahụ & gwa oge emepụtara.
6. End Production-Mass mmepụta ngwaahịa foto maka nnwapụta. I nwekwara ike ịhazi Nnyocha nke atọ.
7. Ndị ahịa na-akwụ ụgwọ maka nguzozi na BEE hipgbọ mmiri ngwongwo .Ọ nwekwara ike ịnabata okwu ịkwụ ụgwọ-Balance megide B / L Detuo Ma ọ bụ L / C ịkwụ ụgwọ Okwu. Gwa nọmba nsuso ma lelee ọnọdụ maka ndị ahịa.
8. Iwu nwere ike ịsị “mechaa” mgbe ị natara ngwongwo ma afọ ju ha.
9. Nzaghachi iji BEE banyere Ogo, Ọrụ, Nzaghachi ahịa na Ntụnye. Anyị nwere ike ime nke ọma.
Q: Kedu akụkụ akpaaka ị na-enye?
A: Engine akụkụ ahụ mapụtara, Automobile Chassis akụkụ, nkwusioru akpaaka akụkụ, Vehicle nnyefe usoro, Automotive nzacha, breeki na mpe mpe akwa akụkụ na ndị ọzọ dị iche iche nke Auto akụkụ ahụ mapụtara.
Ajụjụ: A na-eji ngwaahịa gị n'ụwa niile?
A: Ee, anyị na-enye Mid-East, Africa, South America, ndịda Asia, Ukraine, Italy, Australia na wdg, Ọtụtụ akụkụ injin na-eji mba niile na ngwa.
A: T / T 30% dị ka nkwụnye ego, na 70% tupu nnyefe.
Q: Kedu maka oge nnyefe gị?
A: Na mkpokọta, ọ ga-ewe 3 to10 ọrụ ụbọchị mgbe na-anata gị n'ihu ugwo. Oge nnyefe akọwapụtara na-adabere na ihe na oke nke usoro gị.
Q: you nwere ike ịmepụta dị ka ihe atụ?
A: Ee, anyị nwere ike mepụta site na nnwale gị ma ọ bụ eserese teknụzụ gị. Anyị nwere ike iru ebu na ihe nrụpụta.
Q: you na-anwale ngwongwo gị niile tupu nnyefe?
Q: Kedu ka ị si eme ka azụmahịa anyị bụrụ ogologo oge ma nwee ezigbo mmekọrịta?
A: 1.Anyị na-ejide ezigbo mma na asọmpi ego iji hụ na ndị ahịa anyị ritere uru.
2. Anyị na-asọpụrụ ndị ahịa ọ bụla dịka enyi anyị ma anyị ji obi anyị niile na-azụ ahịa ma soro ha nwee enyi, n'agbanyeghị ebe ha si.
Nke gara aga: Trọtị Belt Tensioner pole maka Mercedes-Benz OEM 0005500833 0005501633
Osote: Igwe oriọna dị elu dị mma maka MB CABINA641 6418200861 LH 6418200961 RH 3818203961 LH 3818204061 RH
Fog Oriọna maka BENZ ACTROS MP2 L: 9438200056 ma ọ bụ R: ...
Plastic n'azụ Mudguard Oem 9435200020 maka MB Act ...
na-ekpo ọkụ na-ere European arọ gwongworo auto mapụtara pa ...
Factory N'ogbe N'ihi Benz breeki Drum OEM 62442 ...
OEM 9608103516 LH ụgbọala n'akụkụ mirror maka Mercede ...
Igba Iron Truck Front breeki Drum 6584210001 maka MB